Adobe InDesign CS3 (မြန်မာ)
တောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Adobe indesign cs3 မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . pagemaker ကတော့ နောက်ကောက်ကျန်ခဲ့ပြီလေ . indesign ကတော့ pagemaker အစား နောက်ထက်ထွက်တဲ့ new version program ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ